အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန်အတွက်လိင်စွဲလမ်းမှု၏သမိုင်း - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
(Linda Hatch ပါရဂူဘွဲ့အားဖြင့်) It is the height of the AIDS epidemic, around XNUMX years ago. Dr. Patrick Carnes, the founding father of sex addiction theory, is going to speak to the gay community. He has been invited in byarespected African American sexologist who feels that the gay community really needs to hear his message. On this occasion Dr. Carnes is transported in one of three identical limos so that if he was attacked it would be impossible to know which limo he was in.
အဆိုပါလှောင်ပြောင်ခြင်းနှင့်နှောင့်ယှက်အစောပိုင်းစတင်ခဲ့ပြီးကိုရပ်တန့်ဘဲနေ၏။ စိတ်ဒဏ်ရာနှင့်စွဲလမ်းမှုပညာရှင်များများအတွက်နိုင်ငံတကာအင်စတီကျု၏ယခုသမ္မတ Carnes '' သမီးဒေါက်တာ Stefanie Carnes, သူမဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းကသူမအဖေသေခြင်းတရားခြိမ်းခြောက်မှုများကိုလက်ခံရရှိကြောင်းအောက်မေ့။
ဒေါက်တာ Carnes လိင်စွဲလမ်းများအတွက် 12-Step ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည့်အခါတောင်မှအခြို့ AA ကိုရပ်ရွာထဲတွင်ဒေါသထွက်ခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအကြမ်းဖက်တုံ့ပြန်မှု evoked သောစိတ်ကူးဘာပါလဲ? "။ တဲ့စိတ်ဓါတ်များ-ပြောင်းလဲအတွေ့အကြုံနှင့်အတူတစ်ဦးရောဂါဗေဒဆက်ဆံရေးဟာ" အရိပ်ထဲကထုတ်သည်သူ၏ 1983 စာအုပ်မှာတော့  Carnes အဖြစ်လိင်စွဲလမ်းသတ်မှတ်အနှစ်နှစ်ဆယ်နောက်ပိုင်းမှာရိပ်ရင်ဆိုင်ခြင်းအတွက်  သူကဤသို့ဆို၏: